… teo Behoririka ny alarobia tolakandro teo, no avy hatrany dia nirimorimo namantana tao amin’ny paositry ny polisy etsy Antaninandro.
Avy hatrany dia nampidiriny tao an-tokontanin’ny polisy ny fiara, saingy nasain’ny tompon’andraikitra navoaka amin’ny maha tsy azo ijanonana ilay toerana. Rehefa nihemotra anefa izy dia nandona fiara iray nijanona teo an-tsisin-dalana indray.
Tamin’izay fotoana izay ihany dia voatery nanala ny mpandeha tao aminy ilay taksiben’ny zotra 163 ka nandeha nikaroka ity taksibe namoa-tsampona. Araka ny fantatra dia mamo ilay mpamily.
« Nilaza tamin’ny saofera aho fa nahadona ny fiarako izy, ka tokony hijanona, saingy notohizany ihany ny lalany. Vao avy nanamboatra fiara izahay tamin’io », hoy ny mpanampy ilay mpamily.
Voatery nifampiraharaha tamin’ny tompon’ireo fiara voadona ilay tompon’antoka tamin’ny fandonana.